Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay Madaxweynaha 10-aad ee JFS – Radio Muqdisho
Waxaa hadda lasoo gabagabeeyey codeynta doorasho la isla gaaray wareegga 3-aad oo soo bilaabay Axadii maanta, waxaana Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo horay u soo noqday Madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya, intii u dhaxeysay sanadihii 2012—2017-kii.
Xasan Sheekh wuxuu noqday Madaxweynihii ugu horeeyey ee mar labaad ku soo noqday xukunka dalka, wuxuuna xilka kala wareegayaa Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo horay uu xukunka ugu wareejiyey shan sano ka hor, sanadkii 2017-kii.
Doorashadaan oo soo bilaabatay maanta duhurkii ayaa lagu kala baxay saqdaan dhexe ee caawa, waxaana soo xirmay todobaadkaan jiitankii dheeraa ee doorashada Soomaaliya.
Xasan Sheekh oo horay ugu guuleystay in dowladii uu hoggaaminayey ay rasmi noqoto oo KMG ka baxdo burburkii kadib, wuxuu caawa noqday Madaxeynaha 10-aad ee Soomaaliya.
Kooramka xildhibaanadii codeeyey ayaa ku furmay 329 xildhibaan oo isugu jira labada Aqal ee BFS, sida uu shaaciyey Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madoobe.
Madaxda Dalka oo u hambalyeeyay Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya.